sbi bank india(sbi bank india) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
राबा बैंकको प्रगतिमा अर्थमन्त्री खुशी, भने-‘बल्ल भवनसँग ब्यालेन्ससिटको म्याचिङ भो’
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आइपीओ आउनसक्ने अर्थमन्त्रीको संकेत
आर्थिक अध्ययन : निक्षेप १९.२% र कर्जा प्रवाह २०% ले बढ्यो
बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सरकारको ध्यान, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत्
sbi bank india
एसबीआईका ग्राहकलाई अलर्ट–यी चार गल्ती नगर्नू, खालि हुनसक्छ तपाईको अकाउण्ट !
काठमाण्डौ । भारतको सबैभन्दा ठूलो बैंक स्टेट बैंक अफ इण्डिया(एसबीआई)ले आफ्ना ग्राहकहरुलाई सचेत गराएको छ । एसबीआईले चेतावनी दिंदै भनेको छ कि बढ्दो बैंक फ्रड(ठगी)का घटनाहरुबाट बच्न ग्राहकहरु सावधान हुन आवश्यक छ । यस्तो ठगी अनलाइन कारोबार गर्दा मात्र नभई एटीएमबाट समेत भइरहेको बैंकद्वारा जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । एसबीआईले आफ्ना...
अब कार्डबिना नै एटीएमबाट पैसा निकाल्न सकिने, तर कसरी ?
काठमाण्डौ । भारतको सबैभन्दा ठूलो सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक(एसबीआई)ले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि नयाँ सुविधा सुरु गरेको छ । यो सुविधामार्फत एसबीआईका ग्राहकले अब कार्डको प्रयोगबिना नै एटीएम मसिनबाट नगद निकाल्न सक्नेछन् । एसबीआईले यो सुविधालाई योनो क्यास नाम दिएको छ । एसबीआईका ग्राहकहरुले भारतभरका १६ हजार ५०० एटीएममा यो सुविधाको...
एसबीआईका कर्मचारीलाई सर्कुलर: शरीर र मुख गन्हाउन नहुने, बैठकमा डकारे कारबाही !
काठमाण्डौ । तपाई अब जब स्टेट बैंक अफ इण्डिया(SBI) वा सो बैंकसँगको सहकार्यमा नेपालमा संचालित एसबीआई बैंकको शाखामा जानुहुन्छ, तब त्यहाँका कर्मचारी एकदमै व्यवसायिक पाउनुहुनेछ, देख्नुहुनेछ । बैंकको कुरा पत्याइदिने हो भने तपाईले एक नयाँ किसिमको अनुभव हुनेछ । यसको मुख्य कारण हो कि भारतको सबैभन्दा ठूलो बैंक एसबीआईले आफ्ना कर्मचारीका लागि डेस...
ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौति गर्दै एसबीआई बैंक !
काठमाण्डौ । भारतको सबैभन्दा ठूलो बैंक एसबीआईले आगामी दुुई वर्षमा आफ्नो कर्मचारीको संख्यामा ठूलो कटौति गर्नसक्ने खबर भारतीय मिडियाहरुले प्रकाशित गरेका छन् । स्टेट बैंक अफ इण्डिया(एसबीआई)मा ६ बैंकको मर्जरपछि त्यहाँ रहेका कर्मचारी समेत थपिएका कारण यहाँ कर्मचारी संख्या निकै अधिक हुनेछ । बैंकका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै मिडिया...
बैकिङ ठगीमा एसबीआई र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड अगाडि
नयाँदिल्ली । बैंकमा हुने ठगीमा भारतको आइसीआइसीआई बैंक पहिलो नम्बरमा आएको छ । अप्रिलदेखि डिसेम्बरको बीचमा बैंकहरुमा दर्ता भएको ठगीको बिषयमा भारतीय स्टेट बैंक(एसबीआई) दोश्रो नम्बर तथा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक तेश्रो नम्बरमा रहेको भारतीय रिजर्ब बैंक(आरबीआई)लाई उद्धृत गर्दै भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । आरबीआईका अनुसार...
एसबीआई बैंक नक्कली नोटको धन्दामा, छानबिन सुरु
नयाँदिल्ली । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको संगम बिहार इलाकामा रहेको एसबीआई बैंकको एटीएममा पैसा निकाल्न गएका एक स्थानीय युवा त्यसबेला चकित भए, जतिबेला एटीएमबाट नक्कली नोट आयो । उनी ८ हजार रुपैयाँ रकम निकाल्न एसबीआईको एटीएममा गएका थिए । एटीएमबाट चारवटा नोट निस्किए, तर यी रिजर्ब बैंक अफ इण्डियाबाट जारी भएका २ हजार दरका नोट थिएनन् । यी...
एसबीआईलाई ४ बैंक अक्वायरको स्वीकृति, ग्राहक संख्या ५० करोड बढी हुने
नयाँदिल्ली । भारतको क्याबिनेट बैठकले स्टेट बैंक अफ इण्डिया(एसबीआई)सँग उसका पाँच सहायक बैंकहरुको बिलयलाई स्वीकृति दिएको छ । एसबीआई बैंकको सञ्जाल भारत बाहेक ३६ वटा देशमा फैलिएको छ । नेपालमा समेत एसबीआई राम्रै वाणिज्य बैंकको सूचिमा पर्छ । भारतका बित्त मन्त्री अरुण जेट्लीले पाँच सहायक बैंकहरुलाई एसबीआईमा बिलय हुन सहमति दिइए पनि...
कोरोना भाइरसले ‘कारको सहर’ वुहान आक्रान्त, विख्यात अटो कम्पनीहरु मन्दीको चपेटामा
कामना सेवा विकास बैंकको ११७ औँ शाखा भीमसेनगोलामा
सिन्धु विकास बैंकको स्थगित वार्षिक साधारणसभा पुनः डाकियो, कहिले र कहाँ ?
फेसबुकको नक्कल गर्दै ट्विटरले पनि दियो सन्देशसँगै इमोजी पठाउने सुविधा
यो साताभरि सुन र चाँदीको भाउमा कस्तो उतारचढाव देखियो ? हेर्नुस्
नेपाल टेलिभिजनमा जागिर खुल्यो, चौथोदेखि सातौँ तहसम्म ९७ जना कर्मचारी माग
रु. ४० करोडको ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ आजबाट बिक्री खुला, क–कसले किन्न पाउँछन् ?
आरम्भसँग मर्जर प्रक्रियामा रहेको चौतारी लघुवित्तको दोस्रो त्रैमास वित्तीय प्रगति कस्तो छ ? हेर्नुहोस्
समता लघुवित्तको लोभलाग्दो प्रगति, नाफा २५७.८०% ले बढ्यो, रिजर्भमा छलाङ
दोस्रो त्रैमासमा एनएमबि लघुवित्तको आकर्षक छलाङ, खुद नाफै ३७५%ले बढ्यो